गाउँमा प्रहरी आउँदा गाउँहरु किन लुके ? यस्तो छ भित्री कारण « Postpati – News For All
गाउँमा प्रहरी आउँदा गाउँहरु किन लुके ? यस्तो छ भित्री कारण
पुस २८, बाजुरा । गौमुल गाउँपालिका–१ अन्द्राडीमा पहिलो पटक प्रहरी पुग्दा गाउँबासी डराएर लुके ।
प्रहरीलाई देखिसकेका त्यहाँका केही युवाले यी त प्रहरी हुन भनेर कानेखुसी गरे पनि कहिल्यै प्रहरी नदेखेका त्यहाँका वृद्धवृद्धा र बालबालिका भने डराएर प्रहरीसंग बोल्न नै सकेकन ।
साठी वर्षीय फुगे रोकायाले भन्नुभयो, “ तमी को हौँ ? काँ जादाँ भया ? तमी हामी जसा आछिन् । कपडा पनि कसान लगायाका” जवाफमा प्रहरी हबल्दार मनीराज भण्डारीले भन्नुभयो, “होइन हामी पनि तपाईं जस्तै मान्छे प्रहरी हौँ । हामी तपार्इंहरुको गाउँ अनुगमन गर्न र तपाईहरूकै सुरक्षाका लागि भनेर आएका हौँ ।”
२८ पुष २०७५, शनिबार को दिन प्रकाशित